Taariikhda My Butros » Maxaan Sameeyaa On Date A First By Aayad Burji
Last updated: Jan. 15 2021 | 5 min akhri
Taariikhaha First waxaa mar kasta dareemayaasha-xirtey noocyo kala duwan oo sababo. Waxaad tahay qof faraxsan in ay taariikhda, iyo fursadaha suurtagalka ah waxa ay u yimaadaan, laakiin aad walwalo samaynta fikrad wanaagsan. Qayb ka mid ah samaynta fikrad wanaagsan ka dhigan tahay qorshaynta taariikh in qofka kale ku raaxaysan doonaa, laakiin sida aad u samayn kartaa in marka aanad garanaynin badan oo ku saabsan weli? Haddii aad og tahay in ay calaamad Burji, isku day in isticmaalka inuu kaa caawiyo inaad la qorsheeyo taariikhda kaamil ah. Akhri:
Haddii aad ku socoto taariikh leh Aries ah, hubiyo in ay noqon doontaa tallaabo-buux-. Aries ma karaan taagan weli fadhiyey muddo aad u dheer, oo u baahan in la wax sameyneyo waqti kasta. Sameynta hawl tabarta badan dibadda ku, sida tamashlaha ama baaskiilka, shaqayn karaan iyaga. Haddii aad rabto in aad iska fadhidid, isku day fuulitaanka dhagax weyn gudaha. Hubi inaad dhaqsataa oo aad tagtaa mid ka mid qayb ka mid ah taariikhda ku xiga aan waqti badan la safrinayo ama meel kasta oo ka mid ah ama ay waayi doonaa xiiso dhakhso – ka hor taariikhda yahay xitaa ka badan!
Haddii aad ku socoto taariikh leh Taurus ah, ogahay in ay tahay calaamada lagu xukumo dareenka, sidaa darteed wax kasta oo ka howlgeli doonaan dareemadooda samaynaya shuqullo wanaagsan ee. Tag makhaayad fiican in uu helo cuntooyinka hodanka ah, ka qayb Dhadhaminta oo khamri ah, qoob habeenkii ku qaataan, ama u tag ruwaayad. Meel kastoo aad tagtidba, diyaar u ah inuu lacag geliyo sababtoo ah Taurus jecel yahay raaxo noqon. In aad calaamad dhulka ah, ay wax kama qaba isagoo geeduhu fiican ay dibedda ilaa iyo inta ma jiraan wax badan oo cayayaanka agagaarka, sidaa darteed haddii aad waddadaas, Keeno shumacyo citronella.
Haddii aad ku socoto taariikh leh Gemini ah, qaataan iyaga oo meel qabow, aan joogtada ahayn, halkaas oo ay jiraan dad badan oo ku wareegsan u raacdid maskax ahaan ay dhiiri-, iyo halkee aad la sheekesto. Ka dhig mawduucyada iftiinka iyo kitaabkii duudduubnaa waxaa la markii ay si deg deg ah u beddeli maadooyinka. Waxay wax kama qaba meel kasta oo ay buuq ama ahaantii aad u gadmi, sida koox, oo run ahaantii sida in. Waxay ku dhihi karaan waxay jeclaan wax adventurous, laakiin calaamadaasuna u malaynaya inay tahay wax kale ka badan ay dhab yihiin, si aadan meel aad u fog ku qaado meel ka baxsan aagooda raaxada.
Haddii aad ku socoto taariikh leh Cancer a, iyaga oo meel keeno aad u caan ah iyaga, meel aad ogtahay in ay joogey in ka hor. Waxay u baahan yihiin u taqaano si aad u dareento raaxo iyo oggolaadaan in ay naftooda in ay kor u furo si aad u. Makhaayad A xasilloon oo ay u badan tahay waa bet ugu wanaagsan, gaar ahaan haddii ay u adeega cuntada raaxada iyo Sariiro ay leeyihiin halkii kursi adag. U sheeg mudalabka in aanay dhibaato ku laba idinka mid aad u badan si ay u haynaa waqti badan si uu u noqdo raaxo aad la, iyo laba idinka mid dareen ahaan ku xidhi karaa.
Haddii aad ku socoto taariikh leh Leo ah, tani waxay calaamad u tahay in jecel yahay drama, sidaa darteed isku day socda in filim ama tiyaatarka. Haddii aad tagto movies ka, hubiyo in ay saare ugu dambeeyay ee la xiddig, iyo haddaad doonayso inaad tagto, tiyaatarka, hubiyo in ay show ugu kulul baxay waxaa hadda. Waxay jecel yihiin inay dareemaan in la badnaa ee ugu, si meel kastoo aad tagtidba, waxaa kaalinta kulul uga dhigi. Haddii ay tahay super flirty leh ma ahan oo keliya in aad, laakiin qof kasta aad soo xiriirtey, si xor ah u muujiyaan yar masayr. Dhab Waxay jecel yihiin in.
Haddii aad ku socoto taariikh leh Virgo ah, ma wax aad u weyn ama olaga sameeyo, oo ha u qaadan meel kasta buuq ama mashquul. Waxaa ka dhig meel aan buuq lahayn halkaas oo ay ku maqli karaan fikirradooda. Waxay tahay mid aad wax ku ool ah, oo mana ay heli karaan haddii aad wax tustuska sameeyo, iyadoo aan loo eegayn sida uu jaceyl aad u maleyso inay tahay. Virgo waxay calaamad u tahay caafimaadka, sidaa darteed isku day makhaayad u adeegta cunto caafimaad leh, ama u tag gym iyaga la. Hubi in aad si deg deg ah oo dejiyo gelyo xumada ay, gaar ahaanna ku saabsan jirkooda, si aad u bixiso qaar ka mid bogaadin carbuunta.
Haddii aad ku socoto taariikh leh Showgii ah, ku qaado si museum farshaxan, farshaxanka, ama bandhig faneedka. Tani waxay calaamad u tahay in ka maqsuuday hadal farshaxanka ugu. Waxaad samayn kartaa wax farshaxanka iyaga la, sida u socdaan in ay muraayad pottery ama in studio glassblowing ah. Waxay ku raaxaysan doonaa ficil ah ee wax abuuraya aad la. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa socda in newest ee, kaalinta trendiest magaalada, haddii ay tahay makhaayad, kooxda, ama park. Libras sida mid fool-ka-dareenka, sidaa darteed xataa haddii aad dhooban yihiin dadka, hayn indhahaaga iyaga ku.
Haddii aad ku socoto taariikh leh Scorpio ah, ku dhegeen meelaha nalalka madow. Waxa ay soo jiidatay inay mugdiga, si taariikhaha maalin. Waxay noqon kartaa gorayada habeenkii aad, si xor ah u bilaabaan taariikhda soo daahay. Waxay jecel yihiin sayniska, sidaa darteed waxaad isku dayi kartaa museum sayniska, gaar ahaan mar inta badan dadka ay aadeen oo ay noqon kartaa oo keliya si buuxda aad la. Waxay sidoo kale jeclaan dhinaca madow ee nolosha iyo wax laga hadlin maadooyinka, sidaa darteed haddii aad qaadan karto meel la jinsi ah wax looga qabto, dhimasho, ama dhiig iyo dhiiranaan, ay u badan tahay qeylyo doonaa isagoo kibirsan.
Haddii aad ku socoto taariikh leh Sagittarius ah, inay u furnaadaan tuurnimo. Calaamad Tani waxay jecel yihiin inay wax qabato jajuubi ah, sidaa darteed wax kasta oo aad u qorsheeyaan malaha ma dhab dhici doona. Waxa aad ku bilaabi doonaa ka baxay okay, laakiin markaas Veer meelo kale, sidaas darteed waa la rogo. Sagittarius jecel yahay dhaqamada kale iyo dalalka, si aad u qaadato in makhaayad u adeegta cunnada qalaad, iyo haddii aad qaadan karto safar, waxaa samayn. Haddii ay u dhow oo aad sii joogo dhowr saacadood, ama aad kor boodbooda diyaarad iyo gudbaan badda, ay tahay ilaa masaafo ka. Wax aad u daran ayaa sidoo kale shaqayn karaan, sida ay ugi.
Haddii aad ku socoto taariikh leh Capricorn ah, waa inaad u samaysaa sida dhaqanka sida aad awooddo. Casho iyo filim waa a-okay leh calaamaddan. Iyagu ma jeclaan lagu riixay ka baxsan aagooda raaxada, oo doonaya in ay sameeyaan waxa ay mar horeba si fiican u ogaadaan. Ekow waxa caadi ah iyaga oo ka fogaadaan waalan. Haddii aad iyaga xisbiga qado halkaas oo badan oo lagu guulaystay qaadan kartaa, dadka muhiim u noqon doona, in aad dhalin doonaa qaar ka mid ah dhibcood oo halis ah. Waxay jecel yihiin inay hobnob leh dad kor u jaranjarada bulshada.
Haddii aad ku socoto taariikh leh Aquarius ah, u samaysaa sida caadi ahayn sida aad awooddo. Calaamaddan jecel yahay wax aan caadi ahayn oo ka duwan tahay wax ay si caadi ah samayn lahaa, si riixo ilaa baxsan aagaaga raaxada sida aad awooddo. Waxa kale oo ay si raaxo leh in taariikhda koox tahay, inta badan sababtoo ah waxay doonayaan inay saaxiibbo kuu leh horreeya si ay isugu dayaan in ay u sii caadi ah. Tag meelaha yihiin calaamadaha bey'ada saaxiibtinimo, weyn on dib u warshadaynta, ama meesha aad qaar ka mid ah hawlaha samafal wada samayn karaan, uruurinta qashinka sida, tabarucidda ee jikada maraq, ama u socotey casho samafal ah.
Haddii aad ku socoto taariikh leh Pisces ah, ogahay in calaamadaas waa super taataabtay, Waxay u badan tahay in ka badan kasta oo kale, si ay qiimayn doonaa wax kasta oo waji ka Waloow. Casho A taataabtay meesha aad serenaded iyo Afar xarig ahi ku weheliyo socod xeebta wax ay jeclaan lahaa. Pisces sameeyo biyaha jeclahay, si aad u tegi kartaa makhaayad halkaas oo aad ka heli doonaa aragtiyo biyaha. Waxa kale oo ay jecel yihiin music, sidaa darteed isku day ruwaayad, lamariyo, ama ka baxo qoob. Waxay dhab ahaan doonayaan kaliya in ay noqon kuu dhow. Doorashada Oddball? Zoo The. Waxay jecel yihiin xoolaha.